Qubanaha » Raíisulwasaare’kheyre”” Lacagaha aad soo dirtaan waxaad ku soo hagaajisaan Gudiga Abaaraha.
Raíisulwasaare’kheyre”” Lacagaha aad soo dirtaan waxaad ku soo hagaajisaan Gudiga Abaaraha.
“Sheekh Nuur waxaan rabaa inaan ku sheego Madaxweynaha ayaa ila soo hadlay, nin ganacsade ah ayaa u keenay lacag dhan 30 sodon kun oo dolar oo qoyskiisa loogu talagalay, Madaxweynuhu waxa uu igu soo wareejiyay lacagtaas si loo siiyo dadka ay abaartu heysato, anaguna waxaan rabaa inaad iga guddoontaan lacagtaas oo aad gaarsiisaan dadka loogu talagalay” ayuu yiri Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya.
Dhanka kale Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa guddiga u sheegay in goordhaw ay soo gaari doonto lacago ay balan qaadeen ganacsato Soomaaliyeed kadib kulan uu la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada.
“Waxaan kaa codsaneynaa haddii aad awooddid inaad caawiso walaalkaa, ha sugin beri iyo waqti kale, dadka walaalaheyga ah ee dunida ku nool waxaan u sheegayaa in dalka lagu dhibaateysanyahay fadlan soo gaarsiiya guddiga gurmadka, waxaana arrintan nooga mas’uul ah Sheekh Nuur Baaruud ee walaalahaaga sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaar, anaguna waxaan balan qaadeynaa inaan gaarsiineyno dadkii loogu talagalay” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.